काठमाडौं । नवकान्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले एटिएम सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । यो एटीएम कार्ड संस्थाका सदस्यहरुलाई पुस मसान्तसम्म निःशुल्क प्रदान गरिने संस्थाका का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हर...
कृषि विकास बैंकका तत्कालीन कर्मचारीद्धय भ्रष्टाचारीलाई सफाई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सात बर्षअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर दुइजनालाई सफाई दिएको छ । न्यायाधीशहरु शारदप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको पुर्ण इजलासले झुटा...
जनता बैंकले गर्यो यस्तो घोषणा !
काठमाडौं । जनता बैंकले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एक जानकारी प्रस्तुत गरेको छ । विगत केही समय देखि देखिएको बजारको तरलता अवस्थालाई मध्येनजर गरी यस बैंकद्वारा लागु गरिएको बार्षिक १२ प्रतिशतले मासिक...
सेयरबजार सुधार गर्ने उपाय सिफारिस संस्थागत विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव
काठमाडौं, झण्डै दुई वर्षदेखि सेयरबजारमा देखिएको उच्च तहको उतारचढावलाई सन्तुलनमा ल्याउने उपाय सिफारिस गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले अर्थमन्त्री डा. यु...
एनआईसी एशियाको २१ औं वार्षिक साधारण सभा, १०% बोनस पारित
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १०.५२६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । पौष ४ गतेका सम्पन्न २१ औं वार्षिक साधारण सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम १० प्रतिशत बोनस सेयर र नगद प्र...
सेयर–बजार : नेप्से आज पनि घट्यो
काठमाडौं, ४ पुुस । साताको चौंथो कारोवार दिन आज बुुधबार पनि नेप्से घटेको छ । नेप्से आज पाँच दसमलव ४६ अंकले घटेर ११ सय ६२ दसमलव ७० अंकमा पुुगेको छ भने सेन्सिटिभ एक दसमलव २६ अंकले घटेर दुुई सय ४७ दसमलव ३...
सांग्रिला डेभलपमेण्टको लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले गत अवाको वितरण योग्य नाफाबाट शेयरधनीहरुको लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ४ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ५ दशमलव ३० प्रतिशत नगत लाभांश...
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको नगद लाभांश स्वीकृत भएको छ । बैंकले आव २०७४/७५ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १४ दशमलव २० प्रतिशत नगद लाभांश स्वीकृ...